SOMALITALK - JAWHAR
Ma Dooneysaa Nabad iib ah?
Iyadoo dalka uu muddo 14-sano ah ku jiray dagaallo sokeeye ayaa haddana, gobollada qaarkood waxaa ka jira maamullo qaarkood ay ku yimaadeen awood ciidan, kuwo kalena ay ku yimaadeen dadweynaha deegaanka oo tashaday, haddaba mar aan dhawaan safar shaqo ah ku tagay degmooyinka Balcad iyo Jowhar ayaa waxaan halkaas ku soo arkay waxyaabo fara badan oo ay deegaannadaasi kaga duwan yihiin gobollada kale ee dalka.
Intii aan ku sugnaa degmada Jowhar waxaannu wareysiyo la yeeshay dad halkaasi degenaa oo diiday in magacyadooda la sheego, waxayna ii sheegeen in dadkaasi ay haystaan nabagalyo tii ugu wanaagsanayd oo ah 100%.
Dadku way wada ganacsanayaan waxayna aroortii u jarmaadayaan beerahooda, kuwo kalena waxay dhaqanayaan xoolo isugu jira Lo’, Ari iyo Geel, hase ahaatee magaalada dhexdeeda kuma arkaysid wax qori ah, wayna ka duwanayd Jowhar mar aan booqday sannadkii 1998-kii, waqtigaasoo magaalada lagu dilaayay maalin walba dad tiradoodu gaarayso 5-7-ruux, waxaana baaba’ ahaa dhammaan adeegyadii bulshada, sidoo kale waqtigaasi ma jirin wax iskuul ah oo ku yaallay degmada, mana jirin wax hay’ad oo ku sugnaa deegaanka Jowhar.
Waxaa iigu yaabka badnaa in aan arkay "dad caddaan ah ama shisheeye ah oo dhex soconaya magaalada oo aan la ilaalinayn, kuwaasoo ka wada gobolka Howlo samofal ah".
Dhammaan dugsiyadii la burburiyay dib ayaa loo dayac tiray waxaa kaloo dib loo dayac tiray xarumihii hay’adihii dowladda, waxaa dib u soo laabtay dhamaan hay’adihii samafalka waxaana maalin walba magaalada ku arkaysaa gawaari fara badan oo ay leeyihiin hay’adaha samafalka oo uu ka babanayo calamooda.
Waxyaabihii iigu yaabka badnaa ee aan arko wuxuu ahaa markii aan arkay dad caddaan ah ama shisheeye ah oo dhex soconaya magaalada oo aan la ilaalinayn, kuwaasoo ka wada gobolka Howlo samofal ah.
Sidoo kale magaalada waxaa ku arkaysaa tagaasi ka dhex shaqaynaysa xaafadaha dhexdooda, kuwaasoo loo isticmaalo qaab BL ahaan ah, waxaana markiiba raacaysa ilaa 5-ruux oo bixinaya lacag aan sidaas u badnayn, waxaa kaloo magaalada ku soo badanaya baaskiillada oo ay dadka deegaankaasi ay u arkaan mid u fududeynaya howlahooda, waxaana dadka intooda badan ay ku aadaan beerahooda, mar aan weydiiyay mid ka mid ah dhallinyarada adeegsanaysa sababta ay u doorteen baaskiilkaas, wuxuuna iigu jawaabay "Marka hore wax shidaal ah kaamaga baxayo, marka xiga waxaad ka helaysaa caafimaad, oo jirkaaga ayaa ku dhismaya".
Habeen ka mid ah habeennada ayaa waxaan u soo galay nin halkaa uu uga furan yahay Farmashiye, ayaa waxaan isku dayay inaan ka iibsado daawo, hase ahaatee wuxuu ii sheegay qiimo ka duwan midkii aan xamar ku ogaa, markaasaan ku iri daawadu aad ayay qaali u tahay ee maxaa dhacay, wuxuuna iigu jawaabay: "Daawooyinkaan kala imaanno Xamar canshuur dheeraad ah ayaa la saaraa, sidaas ayaana qaaliga ugu wacan, inkastoo aan waxba ka helin haddana nabadda ayaa wax walba nooga qiima badan".
"Yaanan waxba ka heline waxaa nooga wanaagsan nabadda"
Sidoo kale mar aan galay meel biibito ah oo aan damcay inaan ka iibsado Kookada lagu farasameeyo Muqdisho ayaa islaantii gadaysay waxay igu tiri: "Waa 8-kun halkii dhalo oo kooko ah", markaasaan daba dhigay "Qaalianaa Kookadu?" waxay markiiba iigu jawaabtay iyadoo qoslaysa: "Kartoonkii waxaa ku jira 24-xabo oo midkiiba aan ku soo gadanno 3-kun, oo marka la isku darana imaanaysa 72-kun, balse markii la soo geliyo koontaroolka Jowhar ayaa Kartoonkii waxaa la cashuurayaa 100-kun oo Shilling, markaasay gabadhii tiri maxaan ka helaynaa haddaan qaali iibin", waxay kaloo sii daba dhigtay "Yaanan waxba ka heline waxaa nooga wanaagsan nabadda".
Dhinaca maciishadda markaan eegno aad ayay u jaban tahay, haddii aan tusaale soo qaadanno wasladdii hilka ari ah oo Xamar ka ah 16-kun oo shillin Jowhar waxay ka tahay 8-kun iyadoo laguu raacinayo aargalaan maraq ah, laakiin Baastada iyo Bariiska Xamar ayay isaga mid yihiin, balse waxay dadku inoo sheegeen haddii canshuurta laga qafiifin lahaa in intaas ay ka sii raqiisnaan lahayd.
Degmada Jowhar iyo deegaannada ku xeeran waxay dadku ku jiraan xilligii Jiilaalka, waxayna dadka beerleyda oo gobolka aad u daggan ay isku diyaarinayaan xilligii dayrta, iyagoo ku howlan limidda beeraha, hase ahaatee webiga ayaa ah mid biyo keenay, waxaana meelaha qaarkood dib loo kiciyay matoorradii biyaha ka soo jiidayay webiga, si loogu waraabiyo beeraha ku dhow webiga..
Waxaa degmada Jowhar & deegaannada kale ee ku xeeran soo gala ama laga ururiyaa canshuur xad dhaaf ah, waxayna canshuurta ugu badani gobolka ka soo gashaa Kontorool-ada laga galo Jowhar iyo weliba midda Bishii laga qaado Guryaha, goobaha ganacsiga iyo weliba hay’adaha Samafalka.
Canshuurtaasi 80% waxa ay ku dhacdaa Jeebka madaxda Gobolka iyo weliba maleeshiyooyinka, sidoo kale waxaa iyana canshuur laga qaadaa dadka ku xad-gudba sharciga, tusaale: (Haddii nin maqaayadle ah uusan isticmaalin Karbiyoone ama marada lagashado marka la shaqeynayo waxaa lagu ganaaxayaa lacag gaareysa 500,000), sidoo kale waxaa iyana la ganaaxaa dadka Biyaha ku shuba waddada iyo meelaha aan habbooneyn, waxaa kale oo ganaax kan la mid ah uu ku dhacaa gawaarida marka ay dhigtaan meel aan habooneyn. Arrimihii la yaabka lahaa ee aan la kulmay waxaa ka mid ahaa haddii laba qof uu dagaal dhex maro ama ay is khilaafaan oo ay heshiis hoose ama xeer hoosaad waxooda ku dhameystaan haddii la maqlo arrintaasi waxaa iyana lagu ganaaxayaa lacag 500,000 ah, waayo waxaa laga doonayaa in ay tagaan saldhigga Booliska, si gartooda loo qaado ama loogu gudbiyo Maxkamad. Maamulka Gobolka waa uu sii ballaaranayaa, waxaana uu gaaray deegaanno fog-fog, sida Cadalle, Aadan Yabaal, Raage Ceelle iyo deegaanno kale, sidoo kale maamulku wuxuu ku dhow yahay illaa xuduudda u dhexeysa Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, waxaa iyana ka soo xaroota lacag aad u fara badan.
Marka uu maqan yahay Max’ed Dheere wixii howl ah ee Gobolka ka jira waxaa fuliya walaalkii oo lagu magacaabo Axmed Cumar (Jaandhaay)...
Boolisku waxa ay hayaan howl aad u ballaaran, waana meesha keliya ee aad is leedahay waxaa ka socota Shaqooyin, inkastoo Wasaaradihii aan dib loo kicin, haddana mar aan wareysi la yeelannay Maamulku waxa uu inoo sheegay in dhowaan la furi doono xarumihii Wasaaradaha. Marka uu maqan yahay Maxamed Cumar Maxamed (Max’ed Dheere), waxaa ku sime u ah Cismaan Cabdulle Caqiil, hase yeeshee howsha xooggeeda waxaa wada Max’ed Dheere walaalkii oo lagu magacaabo Axmed Cumar (Jaandhaay), isaga ayaana fuliya wixii howl ah ee Gobolka ka jira.
JAWHAR::: Waraysi: Gabar Soomaaliyeed oo Qabtey AIDS
& ka Akhri Halkan
Dhinaca Caafimaadka Gobolka waxaa ka furan Isbitaal weyn ee ay maalgeliso hay’adda INTERSOS, waxaa iyana maalin walba lagu daweeyaa dad fara badan, mar aan wareysannay dhaqtarka Isbitaalka Dr. Max’ed Cumar waxa uu inoo sheegay in ay maalinkii qaabilaan 100% (awood cusbitaalka) oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada.
Degmada Jowhar waxaa ka furan hal Radio oo lagu magacaabo (Radio Jowhar) oo ah nooca FM-ka ah, balse Gobolka kama jiro xoriyadda Saxaafadda, laga soo billaabo Balcad illaa Degmada Jowhar oo Raadiyuhu ma sii deyn karo wixii dhaliil ah ee ka jira gobolka, dhowr jeer ayuuna Guddoomiyaha Gobolka Max’ed Dheere albaabada u laabay Xarunta Idaacadda, iyadoo weliba xabsiga loo taxaabay suxufiyiin fara badan. Mar la furayay Dugsi Sare ee ay maal-gelisay Hay’adda Zam-zam Foundation ayaa raggii weriyeyaasha ahaa ee ka qayb galayay furitaankaasi mar ay marayaan Degmada Balcad ayaa weriye lagu magacaabo Fiyoore damcay in uu warbixinka qoro degmada, balse Nin Boolis ah oo meeshaa ka dhowaa ayaa weriyihii garbaduub u xiray, kaddibna loo taxaabay xabsiga, hase yeeshee dad akhyaar ah oo la socday weriyahaasi ayaa markii dambe ku guuleystay in ay ka soo daayaan xabsiga, waxaana halkaa kaaga muuqanaysa in ay ka jirto cabburin dhinaca saxaafadda, balse dadka deggan Gobolka waxa ay noo sheegeen in haddii la heli lahaa xoriyad saxaafadda ah uu gobolku ku tallaabsan lahaa, waayo saxaafaddu waxa ay sheegi lahayd wixii waxqabad, dhaliilo iyo weliba wixii amaan ah
Inkastoo ummadda Soomaaliyeed ay galeen dagaallo sokeeye, haddana dadka deggan Gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay si aad ah ugu faraxsan yihiin maamulkaasi adag, waayo waxa ay sheegeen in uu qabtay wax badan oo aysan qaban maamullada ka jira gobollada dalka qaarkood, waxayna xuseen in haddii lacagta canshuurta ah ee soo xaroota 30% loo weecin lahaa dhinaca adeegyada Bulshada wax badan ay qabsoomi lahaayeen oo isugu jira dayactirka ama dhismaha jidadka, waxbarashada, caafimaadka, inkastoo maamulka Gobolku mar aan wareysannay uu sheegay in lacagtaasi intooda badan ay ku qabteen howlo fara badan oo dhinaca Beeraha ah iyo weliba horumarka gobolka, waxayna dadka Gobolku sheegeen in nabadda ay tahay midda ugu mudan in la hor mariyo, waxaana ay ku nuux-nuuxsadeen in lacag walba oo laga qaado ay kaga wanaagsan tahay nabadda ay heystaan, marka haddii aad dooneysid nabad qaali ah tag Gobolka Shabeellaha Dhexe.
....haddii aad dooneysid nabad qaali ah tag Gobolka Shabeellaha Dhexe.
»Cidlada anaa isdhigey ee cidna eersanmaye! [Alhassani]
»Dagaalka Xasan Dahir Aweys ka weyn Jubooyinka! [Dirir]
»Madaxweynaha Dawladda Federalka Somaliya, ayaan xalay ku riyooday
»NIN AAN KUU FURIDOONIN YUUSAN KUU RARIN [Cumar]
»Cabdirisaaq Xaaji Xuseen ololihiisii 1969 iyo kan 2004 [Faarax]
»Galayax iyo Gabayadii [Qormadii Shaafici]